Bang Saray Beach ~ Journey-Assist - Ny tora-pasika tsara indrindra any Pattaya
Pejy fandraisana » Pattaya » Таиланд » Asia » Eran-tany / Faritra » Renirano Bang Saray
Reniranon'i Bang Saray any Pattaya
topy maso Renirano Bang Saray
Bang Saray Beach amin'ny sari-tany
Weather on the beach Renirano Bang Saray
Sary sy horonan-tsary amin'ny tora-pasika Renirano Bang Saray
Hotely Beachfront Renirano Bang Saray
Ny hevitra ao amin'ny Pantai Sar Saray
Fampijaliana ao amin'ny Sarin'i Bang Saray
Bang Saray Beach dia iray amin'ireo torapasika fasika mahafinaritra indrindra ao amin'ny faritr'i Pattaya, ary koa tena kely sy milamina, toy ilay vohitra kely nanjono ilay anarana mitovy ihany amin'ny toerana akaiky.
Ity moron-dranomasina ity dia antipoda mahafinaritra ny Pattaya tsy miala sasatra, manome anao fahafahana hankafizana fialan-tsasatra milamina rehefa tora-pasika ianao ary raha mipetraka eo akaikinao ianao, dia manana alina tsara an-kasinao, tsy manelingelina mozika mafy sy hazavana mamiratra.
Ny fasika any amin'ny Pantai Sar Saray dia iray amin'ireo tsara indrindra hitanao amin'ny morontsiraka atsinanan'i Thailand, na dia tsy ho hitanao amin'ny fihetsik-drano lehibe aza ianao, satria ny rano mandeha mivantana amin'ny promenade.
Na amin'ny vanim-potoana ambony dia afaka mihaona amina fianakaviana sy mpanjono bebe kokoa noho ny mpizaha tany.
Tsy faran'izay kely dia noho ny fisian'ireo trano fandraisam-bahiny tsy dia mahazatra firy ato amin'ity faritra ity. Na izany aza dia afaka mahita vaovao vitsivitsy ianao eo am-panamboarana, ary koa tranobe vaovao. Koa tsy ho ela, afaka miova ny zava-drehetra eto.
Ny fatiantoka amin'ny moron-dranomasina ity dia ny morontsiraka fasika somary tery, izay nanjavona tanteraka amin'ny rano avo. Na dia tsy ny lavan'ny tora-pasika aza izany, fa amin'ny ampahany lehibe aminy.
Ny mifanohitra amin'izany anefa dia saika tsy misy onja mihitsy amin'ity tora-pasika ity, madio ny rano eto, ary malefaka ny fidirana amin'ny rano. Saingy, indrisy, maro be ny vody aty ambany (mihatra amin'ny sisiny roa amin'ny morontsiraka), noho io antony io dia mitarika ny fandotoana rano avy hatrany ny onjan-dranomasina.
Fa ny faritra afovoan'i Bang Saray dia madio be, misy koa ny palmie, fa tsy misy foto-drafitrasa ary tsy feno olona.
Làlana manakaiky ny moron-dranomasina ary misy zaridaina misy eo amin'ny kianja filalaovana, izay mamangy ihany koa ny fianakaviana eo an-toerana miaraka amin'ny ankizy.
Ankehitriny, ny ampahatelon'ity tora-pasika ity dia natokana ho an'ny fitsangantsanganana fanjonoana, izay amin'ny lafiny iray dia faharatsiana, ary etsy ankilany, dia nandray anjara tamin'ny zava-misy fa eo amin'ny eo akaiky eo dia misy trano fisakafoanana tsara misy menu amin'ny hazan-dranomasina.
Dia ho an'ireo izay mahaliana ny kolontsaina ao an-toerana dia hahaliana ny mandehandeha amin'ireto seranana ireto mba hahitanao amin'ny masonao ny fomba miaina ny olona any an-toerana izay tsy mifandray amin'ny fizahantany.
Ny eo akaikin'ny moron-dranomasina dia misy ny Bang Saray Public Park, izay toerana mahafinaritra ka miala sasatra amin'ny tolakandro. Eo koa ny sary sokitra lehibe mandeha antsantsa,
ary avy eo dia misy endrika hafa momba ny zazavavy amin'ny zazavavy (zazavavy ihany koa.
Famoronana ratra any Pattaya (Hardeep)
Ny endri-javatra iray hafa amin'ity tora-pasika ity dia ny tsy fahitana lavitra azy, nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, nisy sambo nandehanana sambo 60m lava. (ilay toerana antsoina hoe Hardeep). Ary izao io toerana io no toerana fisakafoanana faran'izay malaza ao Thailand
"Ny Hardeep." Ratsy - Fahatsiarovana any Pattaya
Aiza no misy azy. Ahoana no hahatongavana any
Ny mpandrindra ny sambo entona - N 012'31.5, E100'57.5. - https: //goo.gl/maps/cnBF6YQtKdfFb1n98
Adiresin'ny tora-pasika: 24 Bang Sare, Distrika Sattahip, Chon Buri, Thailandy
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana (torapasika) https://goo.gl/maps/zNYSs1S8RYhmsdUq6
Bang Saray Beach ao Pattaya amin'ny sari-tany
Toerana marina ao amin'ny Pantai Sar Saray
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany ahitanao ny toetrandro ankehitriny ao amin'ny Pantai Sar Saray. Ity ambany ity ny fandaharam-potoana ahafahanao mandroso, amin'ny alàlan'ny famoronana toetr'andro ho an'ny filanao.
Renirano Bang Saray Sary sy horonan-tsary
Ny hotely akaikin'ny Beach Sar Saray
Hevitra ao amin'ny Pantai Sar Saray ao Pattaya (Google Review)